အမျိုး သမီးတွေ အသက်ရ လာရင် ဖြစ်လေ့ ရှိတဲ့ အရိုးပွရောဂါ ကို ဒီ နည်းလမ်းတွေ နဲ့ ကာ ကွယ်ထားပါ – Shwewiki.com
အမျိုး သမီးတွေ အသက်ရ လာရင် ဖြစ်လေ့ ရှိတဲ့ အရိုးပွရောဂါ ကို ဒီ နည်းလမ်းတွေ နဲ့ ကာ ကွယ်ထားပါ
ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အရရော၊ သဘာဝအရပါ အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက်ကြီးလာရင် အမျိုးသားတွေထက် အရိုးပါး အရိုးပွရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ် …. ။ အရိုးပါး အရိုးပွ ရောဂါဖြစ်လာရင် ကုသရ ခက်ခဲတာကြောင့် မဖြစ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ပျိုမေတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ဖတ်သင့်ပြီး မေမေတို့ကိုလည်း ဒီနည်းအတိုင်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးလိုက်ပါနော် …. ။
(1) ဆားစားသုံးမှုကို လျှော့ချပါ
တစ်နေ့တာ အစားအသောက်ထဲမှာ ဆားပမာဏ များလွန်းတာက အရိုးဆဲလ်တွေကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှု ဖြစ်စေပြီး အရိုးပါး အရိုးပွတာကို စောစောစီးစီး ကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ် … ။
(2) ပရိုတင်းနဲ့ ကယ်လ်စီယံကို လုံလောက်အောင်စားပါ
ပရိုတင်းဓာတ်က အရိုးသိပ်သည်းမှု ကောင်းစေတာကြောင့် နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာ အသားကို လုံလုံလောက်လောက် စားပေးရပါမယ်။ အသားမကြိုက်ဘူး ဆိုရင်တောင် အသားဓာတ်ရတဲ့ အစားအစာတွေကို စားသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အရိုးသန်မာဖို့ ကယ်လ်စီယံဓာတ်က အလိုအပ်ဆုံးဆိုတာ လူတိုင်းသိပြီးသားပါပဲ … ။
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ကယ်လ်စီယံကို အများဆုံးရနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေကတော့ ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ တို့ဖူး နဲ့ပဲငပိတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အရိုးအတွက် အရေးကြီးတာကတော့ ဗီတာမင်ဒီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် ဒီကိုနေရောင်ခြည်ကနေအများဆုံးရနိုင်တာမို့ မနက်ခင်းဆယ်နာရီမထိုးခင်နေစာလှုံပေးသင့်ပါတယ် … ။
(3) အရိုးသန်မာစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပါ
အရိုးတွေ အချိန်တွေအကြာကြီး သန်မာနေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းကမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ အရိုးသန်မာစေဖို့အတွက် ဝိတ်တုံးလေးတွေ မ တာ၊ လမ်းအနှေး/အမြန်လျှောက်တာ နဲ့ က ခုန်တာတွေကို လုပ်ပေးရပါမယ် … ။
ခန္ဓာကိုယ်က ဘယ်လောက် ဝလာလာ အရိုးကတော့ နဂိုအရွယ်အစား အတိုင်းပါပဲ။ အသက်(၃၀)ကျော်ပြီ ဆိုတာနဲ့ အရိုးဖွဲ့စည်းမှုကလည်း အလိုလို ပါးလျလာတာမို့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေလေ အရိုးခံနိုင်ရည် နည်းလေလေဖြစ်လာတာကြောင့် အရိုးအက်တာ၊ ကျိုးတာတွေ ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်ကိုယ်အလေးချိန်ရအောင် အမြဲတမ်း ထိန်းထားသင့်တာပါ … ။
(5) တစ်နေ့ကို ကော်ဖီတစ်ခွက်ထက် ပိုမသောက်ပါနဲ့
သင်ဟာလည်း ကမ္ဘာပေါ်က လူပေါင်းများစွာလိုပဲ မနက်ခင်းမှာ ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ မစတင်ရရင် မပြည့်စုံဘူးလို့ ခံစားရတဲ့သူလား။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ မနက်တစ်ခွက်နဲ့တင် ကျေနပ်လိုက်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို ကဖင်းဓာတ်တွေပိုလျှံသွားရင် အရိုးရဲ့သိပ်သည်းဆနဲ့ပတ်သက်လို့ တိုက်ရိုက်ထိခိုက်မှုကိုဖြစ်စေပြီး အရိုးပါး အရိုးပွရောဂါဖြစ်နိုင်ချေပိုများလို့ပါ …. ။
အမြိုး သမီးတှေ အသကျရ လာရငျ ဖွဈလေ့ ရှိတဲ့ အရိုးပှရောဂါ ကို ဒီ နညျးလမျးတှေ နဲ့ ကာ ကှယျထားပါ
ခန်ဓာကိုယျဖှဲ့စညျးပုံ အရရော၊ သဘာဝအရပါ အမြိုးသမီးတှဟော အသကျကွီးလာရငျ အမြိုးသားတှထေကျ အရိုးပါး အရိုးပှရောဂါ ဖွဈနိုငျခပြေိုမြားပါတယျ …. ။ အရိုးပါး အရိုးပှ ရောဂါဖွဈလာရငျ ကုသရ ခကျခဲတာကွောငျ့ မဖွဈခငျ ကွိုတငျကာကှယျထားတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ပြိုမတေို့ ကိုယျတိုငျလညျး ဖတျသငျ့ပွီး မမေတေို့ကိုလညျး ဒီနညျးအတိုငျး ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှု ပေးလိုကျပါနျော …. ။
(1) ဆားစားသုံးမှုကို လြှော့ခပြါ
တဈနတေ့ာ အစားအသောကျထဲမှာ ဆားပမာဏ မြားလှနျးတာက အရိုးဆဲလျတှကေို တိုကျရိုကျသကျရောကျမှု ဖွဈစပွေီး အရိုးပါး အရိုးပှတာကို စောစောစီးစီး ကွုံတှလေ့ာနိုငျပါတယျ … ။
(2) ပရိုတငျးနဲ့ ကယျလျစီယံကို လုံလောကျအောငျစားပါ
ပရိုတငျးဓာတျက အရိုးသိပျသညျးမှု ကောငျးစတောကွောငျ့ နတေို့ငျးနတေို့ငျးမှာ အသားကို လုံလုံလောကျလောကျ စားပေးရပါမယျ။ အသားမကွိုကျဘူး ဆိုရငျတောငျ အသားဓာတျရတဲ့ အစားအစာတှကေို စားသငျ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ အရိုးသနျမာဖို့ ကယျလျစီယံဓာတျက အလိုအပျဆုံးဆိုတာ လူတိုငျးသိပွီးသားပါပဲ … ။
ခန်ဓာကိုယျအတှကျ လိုအပျတဲ့ ကယျလျစီယံကို အမြားဆုံးရနိုငျတဲ့ အစားအစာတှကေတော့ ဆယျလျမှနျငါး၊ တို့ဖူး နဲ့ပဲငပိတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ နောကျထပျ အရိုးအတှကျ အရေးကွီးတာကတော့ ဗီတာမငျဒီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဗီတာမငျ ဒီကိုနရေောငျခွညျကနအေမြားဆုံးရနိုငျတာမို့ မနကျခငျးဆယျနာရီမထိုးခငျနစောလှုံပေးသငျ့ပါတယျ … ။
(3) အရိုးသနျမာစမေယျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ လုပျပါ
အရိုးတှေ အခြိနျတှအေကွာကွီး သနျမာနဖေို့ လကေ့ငျြ့ခနျးကမဖွဈမနလေိုအပျပါတယျ။ အရိုးသနျမာစဖေို့အတှကျ ဝိတျတုံးလေးတှေ မ တာ၊ လမျးအနှေး/အမွနျလြှောကျတာ နဲ့ က ခုနျတာတှကေို လုပျပေးရပါမယျ … ။
ခန်ဓာကိုယျက ဘယျလောကျ ဝလာလာ အရိုးကတော့ နဂိုအရှယျအစား အတိုငျးပါပဲ။ အသကျ(၃၀)ကြျောပွီ ဆိုတာနဲ့ အရိုးဖှဲ့စညျးမှုကလညျး အလိုလို ပါးလလြာတာမို့ ခန်ဓာကိုယျကွီးလလေေ အရိုးခံနိုငျရညျ နညျးလလေဖွေဈလာတာကွောငျ့ အရိုးအကျတာ၊ ကြိုးတာတှေ ဖွဈလှယျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပုံမှနျကိုယျအလေးခြိနျရအောငျ အမွဲတမျး ထိနျးထားသငျ့တာပါ … ။
(5) တဈနကေို့ ကျောဖီတဈခှကျထကျ ပိုမသောကျပါနဲ့
သငျဟာလညျး ကမ်ဘာပျေါက လူပေါငျးမြားစှာလိုပဲ မနကျခငျးမှာ ကျောဖီတဈခှကျနဲ့ မစတငျရရငျ မပွညျ့စုံဘူးလို့ ခံစားရတဲ့သူလား။ အဲ့ဒါဆိုရငျတော့ အဲ့ဒီ မနကျတဈခှကျနဲ့တငျ ကနြေပျလိုကျဖို့ အကွံပွုခငျြပါတယျ။ ဘာလို့ဆို ကဖငျးဓာတျတှပေိုလြှံသှားရငျ အရိုးရဲ့သိပျသညျးဆနဲ့ပတျသကျလို့ တိုကျရိုကျထိခိုကျမှုကိုဖွဈစပွေီး အရိုးပါး အရိုးပှရောဂါဖွဈနိုငျခပြေိုမြားလို့ပါ …. ။
မ လှ တဲ့ အိမ်ထောင် ရှင်မ မ ရှိဘူး… အသုံး မကျ တဲ့ အိမ်ထောင် ဦးစီး ပဲ ရှိ တယ်
မန္တလေး မှာပွဲဆိုရင်း ရဲ စခန်းရော က် ခဲ့ ရ တဲ့ သရုပ်ဆောင်အ ဆိုတော် အိစီကွေး